Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Jimce Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Jimce Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu. Idilkiinba salaan dhamaan akhristayaasha sharaftalahow kuna soo dhawaada barnaamijkeenii sida maalin laha ahaa aanu idiinku soo gudbin jirnay waxyaabaha ay wargaysyada yurub ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaaga ayaa gabogabo kusii dhow, waxayna kooxaha wali uu kusii jiro damaca ay ciyaartooyo cusub kula soo saxeexanayaan ay haystaan fursado kooban oo saacado ah oo ay kaga soo faa’iidaysan karaan, si ay iskugu xoojiyaan xili ciyaareedkan socda.
Kooxaha qaar ayaa ka dhamaaday suuqa iibka oo lasoo wareegay ciyaartoydii ay doonayeen, kuwo kale ayaanay wali fari ka qodnayn oo ku raad-joogaya xiddigaha ay doonayaan illaa daqiiqadda ugu dambaysa, halka kooxo kalena ka shaqaynayaan sidii ay u iibin lahaayeen ama amaah ugu bixin lahaayeen laacibiinta aan manfaca badan u lahayn ama dheeraadka ku ah safkooda.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaysa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta oo Jimce ah:
Tottenham ayaa iska diidday dalab £1.5 milyan oo Gini xambaarsanaa oo amaah lagaga qaadanayay laacibka khadka dhexe ee reer England ee Dele Alli, waxaana 24 jirkan soo dalbatay PSG. (Guardian)
Spurs waxay dhinaceeda ka dalbatay Chelsea in amaah lagu siiyo difaaca reer Germany ee Antonio Rudiger oo 27 jir, waxaana labada dhinac u socda wada-hadallo. (Nicolo Schrira)
Arsenal ayaa ogolaatay in laacibkeeda khadka dhexe ee reer Uruguay ee Lucas Torreira oo 24 jir ahi uu heshiis amaah ah ugu wareego Atletico Madrid, waxaanay hadda u dhaqaaqaysaa sidii ay booskiisa u keeni lahayd 22 jirka Lyon ee Houssem Aouar. (AS)
PSG ayaa u xadhko xidhanaysa sidii ay Arsenal uga hor-qaadi lahayd kubbad-sameeyaha Lyon ee Hussem Aouar. (L’Equipe)
Leicester City ayaa albaabada u furtay dalabyada laga soo gudbinayso 24 jirkeeda khadka dhexe ee Demarai Gray oo sannadkii ugu dambeeyey ee heshiiskiisu socdo. (Mirror)
Inter Milan ayaa isku diyaarinaysa inay Chelsea hordhigto dalab ay kaga doonayso 29 jirka reer Spain ee Marcos Alonso oo ay isku dhacsan yihiin Frank Lampard. (Sky Sports)
Bayern Munich waxay wada-hadallo la bilowday Chelsea oo ay ka doonayso inay amaah kaga qaadato Cllum Hudson-Odoi, kaddib markii ay sannadkii hore ku guuldaraysatay inay si rasmi ah ugala wareegto laacibkan 19 jirka ah. (Bild)
Manchester United waxay isku dayaysaa inay la saxeexato Amad Traore oo ah 18 jir garabka weerarka uga ciyaara Atalanta, una dhashay waddanka Ivory Coast. (MEN)
Roma ayaa qarka u saaran inay heshiis rasmi ah Manchester United kagala wareegto difaaca reer England ee Chris Smalling. 30 jirkan ayay Man United ku xidhay £20 milyan oo Gini. (The Athletic)
Laba kooxood ayaa lasoo xidhiidhay Liverpool, iyagoo ka doonaya laacibka reer Switzerland ee Xherdan Shaqiri oo 28 jir. (Liverpool Echo)
Fulham waxay dalab 15 Milyan oo Euro ah ka gudbisay difaaca Barcelona ee Jean-Clair Todibo, waxaanu laacibkan 20 jirka ah ee u dhashay Faransiisku doonayaa in loo go’aamiyo inuu si rasmi ah uga baxo Camp Nou. (ESPN)
Barcelona ayaa ku rajo weyn tahay in lacagta ay ka hesho iibka Todibo ay ula tegi doonto Manchester City oo ay ka doonayso difaaca dhexe ee Eric Garcia, iyadoo 19 jirka reer Spain uu diiddan yahay inuu City u kordhiyo qandaraaskiisa sannadka kali ahi ka hadhay. (Ser Catalunya)
Leeds United waxay joojisay heshiiskii ay kula wareegaysay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Bayern Munich ee Michael Cuisance oo ah 21 jir u dhashay Faransiiska, kaddib markii uu ku dhacay tijaabada caafimaadka. (The Athletic)